... တွေ၊ .... တွေ
လူငယ်တွေလဲ ... အုတ်အုတ်ကျက်ကျက်
လူလည်တွေလဲ ... ရှုပ်ရှုပ်ယှက်ယှက်
၄၅ ရက်မြောက်နေ့ ...
တို့တွေနဲ့ အဝေးကြီးပါကွယ် ...
အဲဒါတွေ အားလုံးထက်ပိုပြီး ...
သူ့မှာ အကုန်ရှိသတဲ့ ....
ဘာမှ ယူမသွားရှာလေတဲ့ ....
မိခင်ဒေါ်စု သား ...'
ဆိုခဲ့ရတဲ့ ကဗျာလေး ...
ဖြစ်လာတဲ့ 'ဗယ်လင်တိုင်းနေ့' ဆိုတာထက် ..
အဓိပ္ပာယ် ရှိပါတယ်ကွယ် ...
Posted by mbma at Tuesday, February 09, 2010 No comments:
Myanmar Muslim Research Foundation
အစ္စလာမုအလိုင်းကွန်းမ် ၀ရဟ်မသွလ်လာဟ် ၀ဗရကာသုဟု
အကြောင်းအရာ ။ ။ မြန်မာမွတ်စလင်မ်သုတေသန ဖောင်ဒေးရှင်း၊ မလေးရှားမှ မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ထုတ်ဝေသွားမည့် “အစ္စလာမ့်အလင်း” (The Light of Islam)ဆိုသည့် လစဉ်ဂျာနယ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချိရေးတွင် ငွေအား၊ လူအား၊ အကြံဥာဏ်အားများဖြင့် ပါဝင်ကူညီပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း။
ချစ်ခင်လေးစားအပ်ပါသော မြန်မာမွတ်စလင်မ် ညီအစ်ကို မောင်နှမများခင်ဗျာ။ အလ်ဟမ်းဒုလိလ္လာဟ် ကျနော်တို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ အသနားတော်ဖြင့် မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၀ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၃ ရက်နေ့၌ မြန်မာမွတ်စလင်မ်သုတေသနဖောင်ဒေးရှင်း(Myanmar Muslim Research Foundation) အမည်ရှိ အသင်းတစ်သင်းအား ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါသည်။ ထိုအသင်း၏ ကော်မတီအားလည်း ဖွဲ့စည်းပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အင်ရှာအလ္လာဟ် ကျနော်တို့အနေနှင့် မကြာမီ မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရထံတွင် ယင်း မြန်မာမွတ်စလင်မ်သုတေသနဖောင်ဒေးရှင်းအား တရားဝင် မှတ်ပုံတင်သွားပေမည်။ အသင်း၏ကော်မတီဝင်များ စုစည်း၍ အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ လုပ်ဆောင်ရန် သတ်မှတ်ထားပါသည်။
5-4-24, Jalan 2/124, Taman Connaught, Kuala Lumpur,
56000, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia
Phone No.: +601 6969 9838, Email: mmrf2010@gmail.com
အသင်း၏ အမည်အား မြန်မာဘာသာစကားဖြင့် မြန်မာမွတ်စလင်မ်သုတေသနဖောင်ဒေးရှင်း ဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။ ထို့ပြင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်လည်း Myanmar Muslim Research Foundation ဟု ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အသင်း၏ ခေါင်းစီးတွင် သုံးနှုန်းထားသည့် မြန်မာမွတ်စလင်မ်ဆိုသည့်စကားလုံး၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာ အစ္စလာမ် အား မိမိတို့အဖို့ ဘ၀တည်ဆောက်ရေးလမ်းညွှန် (ဒီးန်) အဖြစ် ခံယူထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံမှ မွတ်စလင်မ်များအားလုံး ပါဝင်ပေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လမ်းစဉ်မှာ အဟ်လေ့စွန္နာဟ် ၀လ်ဂျမာအဟ်ဖြစ်ပေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အထောက်အထားများကား ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၊ တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏ စွန္နာဟ်၊ အိဂ်ျမာအ်နှင့် ကိယားဆ်ွတို့ဖြစ်ပေသည်။
အစ္စလာမ်၏ပညာရပ်များအား လေ့လာ၊ သင်ယူ၊ သုတေသနပြုလုပ်ကာ မြန်မာမွတ်စလင်မ်ထု တစ်ရပ်လုံး လက်တွေ့လိုက်နာ ကျင့်သုံးနိုင်ရေးမှာ ဤအဖွဲ့ကြီး၏ တစ်ခုတည်းသော ရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်ပေသည်။
၃.၁. အစ္စလာမ့်စာ-နယ်-ဇင်းများ ပုံနှိပ်၊ ထုတ်ဝေ၊ ဖြန့်ချိရေး။
၃.၂. အစ္စလာမ့်ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများ ပေါ်ပေါက်၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး။
၃.၃. အစ္စလာမ့်ပညာရေးနှင့် ခေတ်သစ်သိပ္ပံပညာရေး။
၃.၄. အစ္စလာမ့် တရားဓမ္မဟောကြားရေး။
၃.၅. အွန်လိုင်းဒါအ်ဝဟ်လုပ်ငန်းများ စည်းစနစ်တကျပေါ်ပေါက်လာရေး။
၃.၆. အစ္စလာမ့်ဓမ္မသတ်နှင့် အငြင်းပွားမှုများအား ဆုံးဖြတ်ရေး။
၃.၇. ကမ္ဘာ့မွတ်စလင်မ်များနှင့် ဆက်သွယ်ရေး။
၃.၈. မလေးရှားနိုင်ငံရှိမွတ်စလင်မ်များနှင့် ဆက်သွယ်ရေး။
၃.၉. မြန်မာနိုင်ငံရှိ မွတ်စလင်မ်များနှင့် ဆက်သွယ်ရေး။
၃.၁. အစ္စလာမ့်စာ-နယ်-ဇင်းများ ပုံနှိပ်၊ ထုတ်ဝေ၊ ဖြန့်ချိရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ
၁။ အစ္စလာမ့်ရေးရာနှင့် ပတ်သက်သောစာစောင် (၀ါ) ဂျာနယ် (၀ါ) မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုကို မလေးရှားနိုင်ငံတွင် လစဉ်ဖြစ်စေ၊ အပတ်စဉ်ဖြစ်စေ၊ မြန်မာဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေ၊ ဖြန့်ချိရေး။
၂။ မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ထုတ်ဝေသည့် အစ္စလာမ့်ဂျာနယ် အောင်မြင်ခဲ့ပါက အစ္စလာမ့်ရေးရာ နှင့် ပတ်သက်သောစာစောင် (၀ါ) ဂျာနယ် (၀ါ) မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီအောင် ကြိုးစား၍ မလေးရှားနိုင်ငံတွင်သာမက နိုင်ငံတကာတွင် လစဉ်ဖြစ်စေ၊ အပတ်စဉ်ဖြစ်စေ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အာရဗီဘာသာဖြင့်ဖြစ်စေ ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချိရေး။
၃။ မြန်မာမွတ်စလင်မ်ပညာရှင်များ၊ ကမ္ဘာ့မွတ်စလင်မ်ပညာရှင်များမှ ပြုစုရေးသားသည့်၊ မြန်မာမှုပြုထားသည့်စာအုပ်များအနက်မှ သင့်တော်သည့် စာအုပ်စာပေများကို မြန်မာ မွတ်စလင်မ်များ အကျိုးအလို့ငှာလည်းကောင်း၊ ကမ္ဘာ့မွတ်စလင်မ်များ၏အကျိုးအလို့ငှာ လည်းကောင်း၊ မြန်မာဘာသာဖြင့်လည်းကောင်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘာသာစကားများနှင့် လည်းကောင်း ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချိရေး။
၄။ ကျမ်းပြုပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဘာသာပြန်ပုဂ္ဂိုလ်များအား သင့်လျှော်သည့် ထောက်ပံ့ကြေးများကို အဖွဲ့မှ ချီးမြှင့်ရမည်။
၅။ အသင်း၏ ရန်ပုံငွေ ခိုင်မာတောင့်တင်းလာသောအခါ အသင်းမှ ကျမ်းပြုပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဘာသာပြန်ပုဂ္ဂိုလ်များကို လစာပေး၍ ခန့်ထားရမည်။
၆။ စာ-နယ်-ဇင်းနှင့်အသင်း၏စာရွက်စာတမ်းများကို ပုံနှိပ်ရန်အတွက် အသင်း၏ဘဏ္ဍာငွေ အလုံအလောက်ရှိလာသောအခါတွင် အသင်းပိုင် စာပုံနှိပ်စက်တစ်လုံး တည်ထောင်ထားရှိရန်။
၇။ အသင်းပိုင် စာပုံနှိပ်စက်တွင် အားလပ်သည့်အခါ အစ္စလာမ်နှင့် မဆန့်ကျင်သော၊ မလေးရှားနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပဒေနှင့် မဆန့်ကျင်သော စာရွက်စာတမ်းများကို အဘိုးအခယူ၍ ပုံနှိပ်ခွင့်ရှိရန်။
၃.၂. အစ္စလာမ့်ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများ ပေါ်ပေါက်၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ
၁။ မြန်မာမွတ်စလင်မ်လောကတွင် အစ္စလာမ့်ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများအား တစ်စိုက်မတ်မတ် လုပ်မည့်အသင်းအဖွဲ့ဟူ၍ မရှိသေးပါ။ သုတေသနသည် ပညာရေး၏ အသက်သွေးကြော ဖြစ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ အသင်းအနေနှင့် အစ္စလာမ့်ပညာရပ် ဆိုင်ရာသုတေသနများကို လုပ်ဆောင်သွားပေမည်။
၂။ မလေးရှားနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်များ၊ အစ္စလာမ်နိုင်ငံများရှိတက္ကသိုလ်များ၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများရှိ တက္ကသိုလ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ၊ မြန်မာမွတ်စလင်မ်များ၏ အကျိုးအလို့ငှာ လည်းကောင်း၊ ကမ္ဘာ့မွတ်စလင်မ်များ၏ အကျိုးအလို့ငှာလည်းကောင်း အစ္စလာမ့်ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သုတေသန များကို ဆောင်ရွက်သွားပေမည်။
၃။ မြန်မာမွတ်စလင်မ် သုတေသီပညာရှင်များ၏ အကူအညီကို ရှာဖွေရယူ၍ နောင်အနာဂတ် တွင် ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော မြန်မာမွတ်စလင်မ်သုတေသီများကို မွေးထုတ်သွားပေမည်။
၄။ မြန်မာမွတ်စလင်မ် သုတေသီပညာရှင်များ၊ ကမ္ဘာ့မွတ်စလင်မ်သုတေသီပညာရှင်များ၏ အကူအညီဖြင့် သုတေသနသင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ်ပေးသွားပေမည်။
၃.၃. အစ္စလာမ့်ပညာရေးနှင့် ခေတ်သစ်သိပ္ပံပညာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ
၁။ လူမျိုးတစ်မျိုး၊ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်ခြင်းမှာ ပညာရေးကဏ္ဍပေါ်တွင် အဓိက တည်မှီနေသောကြောင့် မြန်မာမွတ်စလင်မ်တစ်မျိုးသားလုံး အစ္စလာမ့်ပညာရပ်များ၊ ခေတ်သစ်သိပ္ပံပညာရပ်များကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီသင်ကြားနိုင်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားပေမည်။
၂။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ထူးချွန်သည့် မြန်မာမွတ်စလင်မ်ကျောင်းသားများ ကမ္ဘာ့တက္ကသိုလ်များတွင် အဆင့်မြင့်ပညာရပ်များ ဆက်လက်သင်ကြားဆည်းပူးနိုင်စေရန် ကျောင်းဝင်ခွင့် လျှောက်ထား ပေးခြင်း၊ စကောလားရှစ်(ပညာသင်ဆု)လျှောက်ထားပေခြင်းများကို ဆောင်ရွက်သွားပေမည်။
၃။ အသင်း၏ ဘဏ္ဍာရေးတောင့်တင်းခိုင်မာလာသောအခါတွင် အသင်းမှ စကောလားရှစ် (ပညာသင်ဆုများ) ချီးမြှင့်သွားပေမည်။
၄။ မလေးရှားရောက် မြန်မာမွတ်စလင်မ် ဒုက္ခသည်များ၏ သားသမီးများ၊ ငွေကြေးမတတ်နိုင် သည့်မြန်မာလူမျိုးများ၏ သားသမီးများ အခြေခံပညာရပ်များ သင်ကြားဆည်းပူးနိုင်ရေး အတွက် မူကြိုကျောင်းများ၊ အခြေခံပညာကျောင်းများကို မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရ၊ အစိုးရ မဟုတ်သော မလေးရှားနှင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၊ တသီးပုဂ္ဂလအလှုရှင်များ ၏ အကူအညီဖြင့် တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်သွားပေမည်။
၅။ မလေးရှားရောက် မြန်မာမွတ်စလင်မ်များ အစ္စလာမ့်အခြေခံပညာရပ်များ၊ ဘာသာစကား များ၊ နည်းပညာများ တတ်မြောက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ သင်တန်းများကို လိုအပ်လျှင် လိုအပ် သလို တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ် သင်ကြားသွားပေမည်။
၆။ မလေးရှားရောက် မြန်မာမွတ်စလင်မ်များအားလုံး ညီညွတ်စွာဖြင့် ဆွလာဟ်ဝတ်ပြု ဆောက်တည်နိုင်စေရန် ရှေ့ရှု၍ မြန်မာမွတ်စလင်မ်ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်တစ်ခုအား မလေး ရှားနိုင်ငံ အစိုးရ၏ တရားဝင် ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တည်ဆောက်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းသွားပေမည်။
၇။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပုဂ္ဂလိက အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစ္စလာမ့်တက္ကသိုလ်တစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာ စေရန် ပြည်တွင်းရှိ ယုံကြည်စိတ်ချအားထားရသည့် အစ္စလာမ့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားပေးမည်။
၃.၄. အစ္စလာမ့်တရားဓမ္မဟောကြားရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ
၁။ အာလင်မ်ပညာရှင်များအား အမှူးပြု၍ မလေးရှားရောက် မြန်မာမွတ်စလင်မ်ထု တစ်ရပ်လုံး၌ စည်းလုံးညီညွတ် သွေးစည်းခိုင်မှုတည်ဆောက်ရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ မွတ်စလင်မ်များ နိုးကြားရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ ကောင်းမှုအတွက် နှိုးဆော်ခြင်းနှင့် မကောင်းမှုများမှ တားမြစ်ခြင်းတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရေးအတွက်လည်းကောင်း အသင်းမှ သင့်တော်သည့် အာလင်မ်ပညာရှင်များကို ခန့်အပ်ပေးသွားပေမည်။
၂။ တရားဓမ္မဟောကြားခြင်း အစီအစဉ်ကို အပတ်စဉ်သော်လည်းကောင်း၊ လစဉ်သော် လည်းကောင်း၊ လုပ်သားပြည်သူအားလပ်ရက်များတွင်လည်းကောင်း ကျင်းပ ပေးသွားပေ မည်။
၃။ အသင်း၏ ဘဏ္ဍာရေး တောင့်တင်းခိုင်မာလာသောအခါတွင် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ အစ္စလာမ့် သာသနာ့ပညာရှင်များအားလည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ အစ္စလာမ့်သာသနာ့ပညာရှင်များအား လည်းကောင်း ပင့်ဖိတ်ကာ တရားဓမ္မဟောကြားခြင်း အခမ်းအနားများကို ကျင်းပပေးသွားပေ မည်။
၄။ ထို့ပြင် အသင်း၏ ဘဏ္ဍာရေးတောင့်တင်းခိုင်မာလာသောအခါတွင် နယ်လှည့်၍၊ နိုင်ငံ တကာလှည့်၍ တရားဓမ္မဟောကြားမည့် ဓမ္မကထိက အာလင်မ်ပညာရှင်များကို ထောက်ပံ့ ကြေးပေး၍ ခန့်ထားရမည်။
၃.၅. အွန်လိုင်းဒါအ်ဝဟ်လုပ်ငန်းများ စည်းစနစ်တကျ ပေါ်ပေါ်က်လာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ
၁။ မလေးရှားနိုင်ငံ၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်တွင် ရောက်ရှိနေသည့်မြန်မာမွတ်စလင်မ် များအား အစ္စလာမ့်ပညာရပ်များ လေ့လာနိုင်ရန် အသင်းမှကြီးမှုး၍ အွန်လိုင်းဒါအ်ဝဟ် လုပ်ငန်းအား စည်းစနစ်တကျ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သွားပေမည်။
၂။ အသင်းပိုင် ၀က်ဘ်ဆိုဒ်များအား မြန်မာဘာသာဖြင့်လည်းကောင်း၊ အခြား နိုင်ငံတကာ ဘာသာစကားများဖြင့်လည်းကောင်း ရေးသားထုတ်လွှင့်နိုင်ရန် ကြိုးစားသွားပေမည်။
၃။ အွန်လိုင်းဒါအ်ဝဟ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် အာလင်မ်ပညာရှင်များ၊ ခေတ်သစ်သိပ္ပံ ပညာရှင်များ၊ နည်းပညာ ပညာရှင်များအား အသင်း၏ရန်ပုံငွေ တောင့်တင်းခိုင်မာလာသော အခါတွင် လစဉ်ထောက်ပံ့ကြေးချီးမြှင့်၍ ရွေးချယ်ခန့်ထားရမည်။
၄။ အပတ်စဉ်အွန်လိုင်းခွသ်ဗာဟ်အား အသင်းမှ တာဝန်ပေးထားသည့် အဆင့်မြင့် အာလင်မ် ပညာရှင်များမှ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၊ စွန္နာဟ်၊ အိဂျမာအ့်၊ ကိယားစ်တို့နှင့်အညီ အဟ်လေ့ စွန္နာသ် ၀လ်ဂျမာအသ်၏ လမ်းစဉ်အတိုင်း ရေးသား ဖြန့်ချိသွားပေမည်။
၅။ အခြားဘာသာဝင်များ အစ္စလာမ်သာသနာအား လေ့လာနိုင်နိုင်စေရန်ရည်ရွယ်၍ ဘာသာ ပေါင်းစုံနှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်းကဏ္ဍအား တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်သွားပေမည်။ ဘာသာပေါင်းစုံ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးအတွက် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များမှ အခြားဘာသာတရား များအား လေ့လာခြင်း၊ အစ္စလာမ်ဘာသာအား အခြားဘာသာဝင်များအား ဖြန့်ချိခြင်းကဏ္ဍ အား ဆောင်ရွက်သွားပေမည်။
၃.၆. အစ္စလာမ့်ဓမ္မသတ်နှင့် အငြင်းပွားမှုများအား ဆုံးဖြတ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ
၁။ အစ္စလာမ်၌ အိုလမာပညာရှင်များ၏ အခန်းကဏ္ဍသည် အလွန်ပင် အရေးကြီးလှပေသည်။ သို့ဖြစ်ပေရာ အသင်းအနေနှင့် မလေးရှားရောက် မြန်မာမွတ်စလင်မ် အစ္စလာမ်သာသနာ့ ပညာရှင်များအား စုစည်း၍ မြန်မာမွတ်စလင်မ်အိုလမာပညာရှင်များဌာနအား အသင်း၏ လက်အောက်တွင် ဖွဲ့စည်းသွားပေမည်။
၂။ မြန်မာမွတ်စလင်မ်အိုလမာသာသနာ့ပညာရှင်များနှင့် ကျွမ်းကျင်သူများမှ ဦးစီးဦးဆောင် ကမကထပြုလုပ်၍ အစ္စလာမ့်ဓမ္မသတ်များအား ဖြေကြားပေးခြင်း၊ အငြင်းပွားမှုများကို ဖြေရှင်းပေးခြင်း ပြုသွားပေမည်။
၃။ မြန်မာမွတ်စလင်မ်အိုလမာသာသနာ့ပညာရှင်များအနေနှင့် လိုအပ်လျှင် လိုအပ်သလို ကမ္ဘာ့အိုလမာသာသနာ့ပညာရှင်များနှင့်လည်းကောင်း၊ မလေးရှားနိုင်ငံ၏ အိုလမာသာသနာ့ ပညာရှင်များနှင့်လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ အိုလမာသာသနာ့ပညာရှင်များနှင့်လည်းကောင်း တိုင်ပင်နှီးနှောခြင်း၊ ဆွေးနွေးအဖြေရှာခြင်းများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်သွားပေမည်။
၃.၇. ကမ္ဘာ့မွတ်စလင်မ်များနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ
၁။ ယနေ့မျက်မှောက်ကာလတွင် ကမ္ဘာ့မွတ်စလင်မ်များနှင့် အစ္စလာမ့်ရေးရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် ကမ္ဘာ့မွတ်စလင်မ်ရေးရာများကို ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန် အလွန်ပင် အရေးကြီးလာသော ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ အသင်းအနေနှင့် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ မွတ်စလင်မ်အသင်းအဖွဲ့များနှင့် ဆက်သွယ်၍ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဆောင်ရွက်သွားပေမည်။
၂။ အသင်းအနေနှင့် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ မွတ်စလင်မ်အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဆက်သွယ်၍ အစ္စလာမ့်အကျိုးကို ထမ်းရွက်သွားပေမည်။
၃။ ကမ္ဘာ့အရပ်ရပ်ရှိမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အပြန်အလှန် လေ့လာရေးအဖွဲ့များ စေလွှတ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးပွဲများကျင်းပခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်သွားပေမည်။
၃.၈. မလေးရှားနိုင်ငံရှိ မွတ်စလင်မ်များနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ
၁။ အသင်းအနေနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံရှိ မွတ်စလင်မ်အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အစ္စလာမ့်ရေးရာ ကိစ္စရပ်များတွင် ပူးပေါင်း ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို အရေးသောကိစ္စ အဖြစ် ခံယူထားပါသည်။
၂။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံရှိ မွတ်စလင်မ်အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ် များနှင့် ပူးပေါင်းလက်တွဲကာ အစ္စလာမ့်အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ၊ မလေးရှားနိုင်ငံအတွက် အကျိုးပြုမည့်လုပ်ငန်းများ၊ မြန်မာမွတ်စလင်မ်များအတွက် အကျိုးရှိမည့်လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
၃.၉. မြန်မာနိုင်ငံရှိ မွတ်စလင်မ်များနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ
၁။ ကျွန်ုပ်တို့ အသင်းအနေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ မွတ်စလင်မ်အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ပူးပေါင်းလက်တွဲကာ အစ္စလာမ့်အကျိုး၊ အမျိုး ဘာသာသာသနာအကျိုး၊ တိုင်းပြည်အကျိုး ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုလည်း အရေးသောကိစ္စတစ်ရပ်အဖြစ် ယုံကြည်ပါသည်။
၂။ ထို့အတွက်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ မွတ်စလင်မ်အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ပူးပေါင်းလက်တွဲကာ အစ္စလာမ့်အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ၊ မြန်မာမွတ်စလင်မ်များအတွက် အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက် သွားပါမည်။
၃.၁၀. မြန်မာမွတ်စလင်မ်အမျိုးသမီးရေးရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ
၁။ မြန်မာမွတ်စလင်မ်အမျိုးသမီးများ အကျိုးရှိစေမည့် စာအုပ်စာတမ်းများကို စီစဉ် ရေးသား ၍ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသွားပေမည်။
၂။ မြန်မာမွတ်စလင်မ်အမျိုးသမီးများအား အာအိရှာဟ်သခင်မ၊ ခဒီဂျာဟ်သခင်မ၊ ဖာသွေ့ မာဟ်သခင်မ အစရှိသည့် စံပြမွတ်စလင်မ်များ၏ အထ္ထုပတ္တိများကို လေ့လာပြီး လက်တွေ့ လိုက်နာကျင့်သုံးစေရန် နှိုးဆော်ရမည်။
၃။ မြန်မာမွတ်စလင်မ်အမျိုးသမီးများအတွက် လစဉ်သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးရမည်။
၄။ မြန်မာမွတ်စလင်မ်အမျိုးသမီးများ အစ္စလာမ့်တရားတော်နှင့်အညီ ၀တ်ဆင်နေထိုင်ကြရန် နှိုးဆော်ပေးရမည်။
၅။ ဗလီကျောင်းတော်တွင် လာရောက် ဆွလာဟ်ဝတ်ပြုလိုသော အမျိုးသမီးများအတွက် အဆင်ပြေလျှင် ၀တ်ပြုဆောင်တစ်ခု ဆောက်တည်ပေးသွားပေမည်။
၃.၁၁. မြန်မာမွတ်စလင်မ်လူငယ်ရေးရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ
၁။ မြန်မာမွတ်စလင်မ်လူငယ်များ အကျိုးရှိစေမည့် စာအုပ်စာတမ်းများကို အသင်းမှ စီစဉ် ရေးသား၍ ထုတ်ဝေဖြန့်ချိပေးသွားပေမည်။
၂။ မြန်မာမွတ်စလင်မ်လူငယ်များအနေနှင့် အလီသခင်၊ ဇိုဘိုင်ရ်သခင်၊ ဟစန်သခင်၊ ဟိုစိုင် သခင်အစရှိသည့် အာဇာနည်မွတ်စလင်မ်များ၏ အထ္ထုပတ္တိများကို လေ့လာပြီး လက်တွေ့ လိုက်နာကျင့်သုံးရေးအတွက် နှိုးဆော်ရမည်။
၃။ မြန်မာမွတ်စလင်မ်လူငယ်များအတွက် လစဉ်ဖြစ်စေ၊ အပတ်စဉ်ဖြစ်စေ သင်တန်းများ ပေးရမည်။
၄။ မြန်မာမွတ်စလင်မ်လူငယ်များသည် အသင်း၏ သက်ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များကို ဆောင်ရွက်ကြရန် နှိုးဆော်ရမည်။
၅။ မြန်မာမွတ်စလင်မ်လူငယ်များသည် တာဝန်ကျသည့်အခါ အဖွဲ့ချုပ်မှ သတ်မှတ်ထားသော အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်များကို တပ်ဆင်ထားကြရမည်။
၁။ ဒါအ်ဝဟ်လုပ်ငန်းသည် အစ္စလာမ်၏ အသက်သွေးကြောဖြစ်ကြောင်း အသင်းအနေနှင့် ယုံကြည်ထားပေသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာမွတ်စလင်မ်သုတေသနဖောင်ဒေးရှင်းအနေနှင့် အစ္စလာမ့်နည်းကျ ဒါအ်ဝဟ်လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်သွားပေမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ဆောင်ရွက်သွား မည့် ဒါအ်ဝဟ်လုပ်ငန်းတွင် အပိုင်း ၂ ပိုင်းပါဝင်ပေသည်။ မွတ်စလင်မ်များအား အစ္စလာမ် ဘက်သို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနှင့် မွတ်စလင်မ်မဟုတ်သူများအား အစ္စလာမ်ဘက်သို့ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း ဟူ၍ဖြစ်ပေသည်။
၂။ အသင်းအနေနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံ၊ စရိပီတဲလ်လင်းရှိ ဒါအ်ဝသ်သဗ်လီးက်ဂျမာအသ်နှင့် လက်တွဲ၍ အစ္စလာမ့်သာသနာပြုလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်သွားပေမည်။
၃။ ယနေ့မျက်မှောက်ကာလတွင် မြန်မာမွတ်စလင်မ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း၌ ခေတ်ပညာ တမျိုးတည်းကိုသာ တတ်မြောက်ပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ငယ်စဉ်ဘ၀၌ အစ္စလာမ့် ပညာရပ်များမသင်ယူခဲ့ရသည့် ခေတ်ပညာတတ်များ များပြားလာပေသည်။ ၎င်းင်းတို့အား အစ္စ လာမ့်ပညာရပ်များ စည်းစနစ်တကျလေ့လာနိုင်ရန် အစီအစဉ်များ ပြုလုပ်သွားပေမည်။
၄။ မွတ်စလင်မ်မဟုတ်သောသူများအား ဒါအ်ဝဟ်ပြုလုပ်မည့်အစီအစဉ်လုပ်ငန်းများကို အသေးစိတ် သုတေသနပြုလုပ်ကာ ဆောင်ရွက်သွားပေမည်။
၅။ အစ္စလာမ့်ဒါအ်ဝဟ်ပြုလုပ်ရန် နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီသော ရေဒီယို လိုင်း (၀ါ) ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းတစ်ခု မြန်မာဘာသာစကားဖြင့် ပေါ်ပေါက်လာစေရန် ကြိုးပမ်းသွားပေမည်။
အသင်း၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ဘဏ္ဍာရေးကို လုံလောက်စွာ ရှာဖွေစုဆောင်းရမည်။
၁။ မြန်မာမွတ်စလင်မ်များ၍ ကျန်းမာရေးအတွက် မလေးရှားရောက်မြန်မာမွတ်စလင်မ် ဆရာဝန် ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ ကူညီမှုရရှိမည်ဆိုပါက အပတ်စဉ်ဖြစ်စေ၊ လစဉ်ဖြစ်စေ အသင်း၏ ရုံးခန်းတွင် အခမဲ့ ကုသပေးသွားပေမည်။
၂။ မလေးရှားနိုင်ငံ၏ အစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အနာဂတ်တွင် မြန်မာမွတ်စလင်မ်ဆေးခန်း တစ်ခုအား တရားဝင်ဖွင့်လှစ်နိုင်အောင် ကြိုးစားသွားပေမည်။
၁။ အသင်းအနေနှင့် မြန်မာစာ၊ မြန်မာဘာသာစကား၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာ ဘာသာရပ်များကို ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းသည် အရေးကြီးကြောင်းယုံကြည်ပေသည်။
၂။ ထို့ကြောင့် အသင်းအနေနှင့် မလေးရှားရောက် မြန်မာမွတ်စလင်မ်များအနေနှင့် မြန်မာစာ၊ မြန်မာဘာသာစကား၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု၊ အနုပညာရပ်များကို မေ့ပျောက်မရှိစေရန် သင်တန်းများ၊ အစီအစဉ်များ ပြုလုပ်သွားပေမည်။
အထက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များအတွင်းမှ ပထမဦးဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည့် အစ္စလာမ့်စာ-နယ်-ဇင်းများ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချိရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ သို့ပါသောကြောင့် ကျနော်တို့ မြန်မာမွတ်စလင်မ်သုတေသနဖောင်ဒေးရှင်းအနေနှင့် အင်ရှာအလ္လာဟ် ရှေ့လာမည့် မတ်လတွင် “အစ္စလာမ့်အလင်း”အမည်ရှိ လစဉ်ဂျာနယ်တစ်ခုအား မြန်မာဘာသာဖြင့် ဦးစွာပထမ စီစဉ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချိသွားပေမည်။ ယင်းဂျာနယ်အား ဦးစီးမည့်အယ်ဒီတာများမှာ ဆရာမ ဒေါက်တာလှလှဝင်းနှင့် ဆရာ မော်လ၀ီမုဟမ္မဒ်ယာစီးန်တို့ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် မိတ်ဆွေတို့ အသင်းအဖွဲ့များအနေနှင့် ဤကဲ့သို့ မွန်မြတ်ကြီးကျယ်သည့်လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် ငွေအား၊ လူအား၊ အကြံဥာဏ်အားတို့ဖြင့် ပါဝင်ကူညီကြပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ မြန်မာမွတ်စလင်မ်သုတေသနဖောင်ဒေးရှင်းအနေနှင့် မိတ်ဆွေတို့၏ အသင်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ပြင်းပြသောဆန္ဒရှိပါသည်။ ကျနော်တို့၏ ဂျာနယ်အားလည်း မိတ်ဆွေတို့နေထိုင်ရာ တိုင်းပြည်အသီးသီးတွင် ဖြန့်ချိရောင်းချပေးမည်ဆိုပါက ကျနော်တို့အနေနှင့် ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။
မိတ်ဆွေတို့အသင်းများအနေနှင့် ကျနော်တို့နှင့် မည်သို့မည်ပုံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည်ကို သိလိုလှပါသည်။ မိတ်ဆွေများအနေနှင့် မအားလပ် အောင်များပြားလှသည့်တာဝန်အသီးသီးမှ အချိန်အချို့အသုံးပြုကာ စာပြန်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါရစေ။ မိတ်ဆွေများ၏ ပြန်စာနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် သတင်းကောင်းကို မျှော်လင့်ခြင်းကြီးစွာဖြင့် စောင့်မျှော်နေပါကြောင်း ပြောပါရစေ။
Phone No.: +6012 6697 335